३० दलीय मोर्चाले मंगलबार देखि आहृवान गरेको तीन दिने आम हड्ताल फिर्ता हुँदैन : प्रचण्ड जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
३० दलीय मोर्चाले मंगलबार देखि आहृवान गरेको तीन दिने आम हड्ताल फिर्ता हुँदैन : प्रचण्ड
जनबोली/ २२ चैत, पोखरा । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० दलीय मोर्चाले मंगलबार देखि आहृवान गरेको तीन दिने आम हड्ताल फिर्ता नहुने बताएका छन् । शनिबार ३० दलले गरेको अन्तरक्रियामा नागरिक समाज, उद्योगी लगायतले आमहड्ताल फिर्ता लिन सुझाव दिइरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन । नागरिक समाज, उद्योगीहरुले डा. गोविन्द केसीले जस्तै अनसन बस्न सुझाव दिएपछि प्रचण्डले मोर्चामा छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, आइतबार पोखरामा अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आन्दोलन नरोकिने बताए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग आजै साँझ छलफल भएपनि कुनै ठोस प्रस्ताव नआएका कारण आमहड्ताल फिर्ता नहुने उनले बताए ।
देशी, विदेशी समुदायबाट हड्ताल फिर्ता लिन दबाव आईरहेपनि सहमति नभई हड्ताल फिर्ता नहुने उनाले बताए । यद्यपी दलहरुबीच सहमति भएमा भने हड्ताल तुरुन्तै फिर्ता हुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेस एमालेले वार्ताको औचित्य समाप्न पार्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र मोर्चाले भने वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने बताए । आइतबार नै समाज कास्कीको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस(एमालेले दुईतिहाईको दम्भ र अहंकार त्यागे सहमति जुट्ने दाबी गरे । उनले भने(‘गिरिजाले थालेको सहमति र सहकार्यको भाव वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वले नबुझ्दा, अनि माधव नेपालले जस्तो अन्य नेताले नबुझेकाले सहमतिमा समस्या भो ।’
माओवादीले जातीय राज्य बाँढ्न लाग्यो भनेर सत्तारुढ दलहरुले भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै उनले एकल जातीय राज्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । पहिचानसहितको बहुजातीय राज्य बनाउन आफ्नो पार्टीले भूमिका खेलिरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रचण्डले देशभरका दाहालहरुलाई एकजुट बनाउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीलाई आजै भेटेर कास्कीमा दाहाल समाजको भवन बनाउन भूमिसुधारलाई भनिदिन आग्रह गर्ने भन्दै उनले १ लाख रुपैयाँ आफ्नो तर्फबाट दिने घोषणा गरे ।